Indlu yaseFama yaseBeaver Valley enomtsalane
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJohanna
I-Quintessential Ontario 3+ igumbi lokulala lendlu yasefama yenkulungwane endala ehleli kwiihektare ezintathu zabucala, ihlaziywe kakuhle kwaye ifanelekile ukubaleka ilizwe. Imizuzu ukusuka eLake Eugenia, iBruce Trail yokunyuka intaba kunye neBeaver Valley Ski Club. Imizuzu engama-30 ukuya eBlue Mountain. Yonwabela iGrey Highland ngaphandle kwaye uphumle ngumlilo ovuthayo weenkuni.
Le ndlu yasefama ihlaziyiweyo inomtsalane inamagumbi okulala amathathu abanzi kwaye ilala ukuya kuthi ga kubantu abasibhozo ngokukhululeka kunye neebhedi ezintathu zobukhulu bokumkanikazi kunye negumbi elinye elineebhedi ezimbini ezingamawele. Phezulu ligumbi lokuhlambela eligcweleyo elinebhafu yeenyawo ezinozipho. Umgangatho ongaphantsi uhlaziywe ngokupheleleyo kunye negumbi lodaka ukugcina i-skis yakho kunye ne-snowshoes, igumbi losapho lokubukela imuvi kunye negumbi lokuhlambela lesibini elineshawa. Igumbi losapho linendawo yokulala eyakhelwe-ngaphakathi enebhedi enkulu yokumkanikazi, nokuba yeyokuthomalalisa kunye nencwadi elungileyo okanye indawo yokulala eyongezelelweyo yesibini.
Igumbi lokuhlala likhululekile kwaye liyamema ngesitovu sokhuni esivuthayo. Igumbi lokutyela linokuhlala abantu abali-10 kwitafile entle yokuvuna.
Ikhitshi yelizwe esanda kulungiswa ixhotyiswe kakuhle ngezixhobo zokupheka kunye nempahla.
Iimfuno eziqhelekileyo zibonelelwa: iitawuli, iilinen, imithwalo, iingubo, iimveliso zephepha, isepha. Ukutya, izinto zomntu kunye neetawuli zaselwandle azifakwanga.
I-Aisling House ikufuphi ne-Eugenia embindini weBeaver Valley, indawo yokudlala yamaxesha amane. Izolile kwaye izolile, ngokusondeleyo kuyo yonke imiba yobomi belizwe kuyo yonke iminyaka. Sifumaneka 2 iiyure ukusuka Toronto, 30 imizuzu ukusuka Collingwood, Blue Mountain ski resort kunye nedolophu quaint of Thornbury. Hamba ngeGrey Road 13 ukufumana ii-wineries e-Kimberley, i-apile orchards (kunye ne-cider), ukukhwela ihashe, kunye negalufa eninzi. Ukuhamba ngeenyawo kunye nokuhamba ngekhephu kuyafikeleleka kwi-Bruce Trail ekufutshane kunye ne-Eugenia Lake Conservation Area. Kukwakho noMlambo iBeaver Valley othandekayo wokukhwela irafti okanye ukukhwela inqanawa ungasathethi ke ngokuloba kwiLake Eugenia. Le ndawo sele idumile ngabakhweli beebhayisikile ehlotyeni.
Ekupheleni kosuku olusebenzayo, buya kwaye uphumule phambi komlilo.
Ifumaneka nge-imeyile okanye ngefowuni ukuba kuyimfuneko.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Grey Highlands